Orinasa manisy marika an-dàlana any China China sy mpamatsy | FANASITRANA ACE
24 ora an-tserasera: + 86-18968212829
Vibrator beton-jiro elektrika miaraka amin'ny frame
Vibrator vita amin'ny maotera lasantsy
Vibrator matevina matetika
Vibrator vita amin'ny beton vita tanana
Masinina fanamboarana beton
Handeha ao ambadiky ny Power Trowel
Fitetezana herinaratra mitaingina
Masinina screed vita amin'ny beton
Screed farany famaranana KCD
Masinina Screed Concrete
Shaft Vibrator Shaft
Compact Compact Plate
Compactable takelaka azo ovaina
Masinina manamarika ny lalana
ACE dia afaka manolotra milina fanamarihana lalana manara-penitra. Ny Machine Push Marking dia iray amin'ireo milina fanalahidin'ny fanamarihana fanamafisam-peo. Ny kalitaon'ny fanamarihana dia miankina amin'ny fahamendrehan'ny vatan'ny masinina sy ny isan'ny fiasan'ny hopper marika, izay maneho ny tsy fitovizan'ny fahombiazan'ny milina.
Thermoplastic Road Marking Machine dia ampiasaina amin'ny fanamarihana ny tsipika taratra (tsipika mahitsy, tsipika tototra, zana-tsipìka, litera ary marika) eny an-dàlambe, arabe an-tanàna, fijanonana, orinasa sy trano fanatobiana entana. Izy io dia manana maodely roa an'ny Hand Push ary iray mandeha ho azy (mandeha amin'ny motera).
Milina fanamarihana fanosehana tanana (karazana screed)
Engine Manual iray, tsy misy motera
Dimensions 1200 mm * 900 mm * 900mm
Fahaiza-manao Sahabo ho 1500m / ora ho an'ny tsipika mitohy tokana mitohy
Mandoko ny hateviny 1.2-4mm
Fampiharana sakany 100mm, 150mm, 200mm
Fikolokoloana ny mari-pana amin'ny loko 170-220 ℃
Fenitra varingarina LPG 15kg,10kg
Manamarika ny sakany 50,80,100,120,150,200,230,250,300mm, sns. Ny masinina dia mety kokoa amin'ny fanamarihana dian-kapoka zebra 450mm.
Fahafahana tanky ho an'ny thermoplastic 105kg
asa Ataovy mafana foana ny lokony miempo sy manisy tsipika.
Milanja tanteraka 125kg
Fahazoana vata vakana fitaratra 25kg
Fomba fizarana vakana Gear Driven, Clutch mandeha ho azy
Miaraha miasa amin'ny preheater Eny
Fahombiazan'ny asa isan'andro 1000 m2
Afaka mampita amin'ny mpamily mampiroborobo, mampiakatra lovia, seza manatsara? Boosting Drive (miaraka amin'ny motera)
Endri-javatra lehibe an'ny milina manamarika ny lalana thermoplastic:
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hery misintona, ny kodiarana mihalalaka, ny milina fanamarihana dia miorim-paka kokoa noho ny an'ny nentim-paharazana rehefa manamarika ny fiampitana zebra 450mm.
Amin'ny alàlan'ny fanandramana misimisy ny gravity, mamily hazo vaovao, maivana kokoa ny masinina fanaovana marika, mampihena ny hamafin'ny fiasan'ny mpandraharaha. Lasa mora kokoa sy mandaitra kokoa àry ny fanaovana marika.
3.Mora ny miasa:
Ny fanamarihana ny sehatry ny hopper hopper dia ahena hatramin'ny 300mm ka hatramin'ny 200mm, marina kokoa, mora ny mifehy, noho izany dia voavaha ny olana toy ny fisintomana hopper miadana sy ny sisin'ny mari-pamantarana tsy mitovy. Ny firafitra fanosehana teboka marobe dia ampiasaina mba hialana amin'ny mpamosavy famoahana materialy matetika mitranga amin'ny vokatra mitovy amin'izany noho ny sisiny roa voatsindry mafy sy ny fiovana lehibe eo afovoan'ny vokatra.
Araho ny hevitry ny mpanjifa aorian'ny nahazoana ny vokatra, ary andramo ny tsara indrindra vitantsika hamahana sy hanatsarana ny kalitao sy ny serivisy
mihoatra ny 90% ny vokatra aondrana
Mifantoka amin'ny Agent Exclusive sy mitondra ny mpanjifanay hitombo miaraka
1.Ahoana ny fandefasana?
A: Safidinao io. Matetika izahay dia manoro hevitra ny fandefasana ranomasina izay manome vidiny mirary. Ary koa, ho an'ny kojakoja fanampiny, dia mety ho ao amin'ny FEDX, DHL sy ny Express international azy ireo.
2. Afaka mamokatra milina namboarina ve ianao?
A: Ie, vitantsika izany. Izahay dia mpanamboatra milina marika marika thermoplastic ao amin'ny tanànan'i Guangzhou.
3. Azoko atao ve ny manitsy ny hatevin'ny tsipika? Ary ahoana?
A: Eny, azo ahitsy amin'ny antsy sy ny fanantonana izy io. Ny hatevin'ny tsipika mahazatra dia 1.2-4 mm.
4.Mety hamokatra milina namboarina ve ianao?
A: Ie, vitantsika izany. Izahay dia mpanamboatra milina marika marika thermoplastic any Guangzhou City ..
Previous: Masinina manamarika arabe rehetra
Manaraka: 65kgs miaraka amin'ny 10.5kn vibrant Plate Compactor
GW42E-GW50E karazana mandeha ho azy
Mpanapaka vy vy GQ40
45mm 13 / 4inch Japoney karazana betina vibrator s ...
GW40A 2.2KW Karazan-tanana
Iraka: manaporofo izahay fa ny fanolorana fitaovana fananganana vaovao dia hanamora ny fiainanao
Fahitana: ho mpamatsy fitaovana manorina eran-tany ho an'ny mpandraharaha matihanina
Soatoavina: mifantoka amin'ny mpanjifa, Fanavaozana, Ankasitrahana, fandresena miaraka
Adiresy: Shenjiao Village, Gulin, Ningbo, Sina 315159